2011 ~ Htet Aung Kyaw
12:28 PM Htet Aung Kyaw No comments
ထက်အောင်ကျော် December 29, 2011 4:51 pm
ကော့မူးရာ ခေါ် ၀မ်ခစခန်းဟာ မဲဆောက်မြို့ကနေ မိနစ် ၃၀ လောက်ပဲ ကားမောင်းရပြီး ထိုင်းဘက်ကမ်း ၀မ်ခရွာအထိ လိုင်းကားတွေတနာရီတစီးနှုန်း ပြေးနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်းသစ်တွေနဲ့ အခိုင်မာဆောက်ထားတဲ့ တံတားကြီး ၂ ခုက ၀မ်ခနဲ့ ကော့မူးရာ စခန်းကြားရှိ သောင်ရင်းမြစ်ကို ဖြတ်ကူးဖောက်ထားတဲ့အတွက် မဲဆောက်ကလာတဲ့ အရေးကြီးကားတွေဟာ နာရီဝက်အတွင်း ကော့မူးရာစခန်းထဲအထိ
ကော့မူးရာစခန်း စစ်သင်တန်းဆင်းပွဲတခုအပြီးမှာ တွေ့ရတဲ့ သင်တန်းမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး အေးမြင့်နဲ့ ABSDF သင်တန်းသားများ
3:05 AM Htet Aung Kyaw No comments
ပဒိုဘသင် အိမ်ကနေ ဘေးပတ်လည်အိမ်တွေကို ကျနော်လေ့လာကြည့််တဲ့အခါ အနီးဆုံးအိမ်က တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစံလင်းရဲ့အ်ိမ်။ အိမ်ပုံစံချင်းက အတူတူပါပဲ။ ဒီအိမ်ဟာ KNU ဗဟိုစည်းရုံးရေးဌာန ရုံးခန်းလည်းဖြစ်ပြီး နာမည်ကြီး သနူးထူးစာစောင် ထုတ်ဝေတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ကွန်ပြူတာခေတ် မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်
5:57 AM Htet Aung Kyaw No comments
8:00 AM Htet Aung Kyaw No comments
NLD ပါတီရဲ့ မှတ်ပုံတင်ကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခွင့်ပြု။ ရုံးခန်းဖွင့်တာ။ စည်းရုံးရေးဆင်းတာတွေ မြင်ရတော့မလား?
4:49 AM Htet Aung Kyaw No comments
ဒီနေ့ထုတ် သတင်းစာပါ NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
Sunday, 18 December 2011 14:46
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ၄င်းတို့ ပါတီ၏ ဦးဆောင်မှုအဖွဲ့သစ် စာရင်းကို (၂၁) ဦးနှင့် စတင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။
ဒီနေ့နိုဗယ်ဆုပေးပွဲနှင့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀-က အခြေနေအမှတ်တရ
ဒီနေ့ နိုဗယ်ဆုပေးပွဲနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀-က အခြေနေအမှတ်တရ။
ဒေါ်စု-နဲ့ မေးမြန်းချက်....(NRK- မှ)
ရန်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ နိုဗယ်ဆု နှစ် ၂၀-အခန်းနား (Burma VJ မှ)
တဖက်မှာ ငြိမ်းချမ်း...တဖက်မှာ ပွဲကြမ်း...လက်လှမ်းအကူညီတောင်းနေလဲ သူတို့မမြင်ရှာ.
(NLD ပါတီကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ခွင့်ပြုကြောင်းနဲ့ NLD ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေကို ဒေါ်စု-ဆောင်းပါး အခန်းမှာ ဖတ်ရှုပါရန်)
7:30 AM Htet Aung Kyaw No comments
NLD ပါတီ တနသာင်္ရီတိုင်းအတွက်ပြင်ဆင်။ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ကျွန်းစုမှာဝင်ပြိုင်မယ်လို့သတင်းထွက်နေ။
1:02 AM Htet Aung Kyaw No comments
ထက်အောင်ကျော် December 1, 2011 8:00 pm
11:47 AM Htet Aung Kyaw 1 comment
(အင်္ဂါနေ့။ နိုဝင်ဘာလ ၁-ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ ABSDF ၂၃-နှစ်မွေးနေ့မှာ စဉ်းစားနိုင်ဖို့အတွက် ၁၇၀၉၁၁-ကဆောင်းပါးကို ပြန်လည် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်)
8:35 AM Htet Aung Kyaw No comments
၂၀၁၁-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁-ရက်နေ့ (လာမဲ့ အင်္ဂါနေ့) မှာကျရောက်မဲ့ ABSDF
တည်ထောင်ခြင်း ၂၃-နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် အမှတ် ၂၀၁-တပ်ရင်း။ မင်းသမီးစခန်းကရဲဘော်တွေ ၁၉၉၈ တုန်းကထုတ်ဝေထားတဲ့စာစောင်တခု ကို ကော်ပီကူးပီး ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပေးဆပ်သွားသူတို့ရဲ့ သမိုင်းကိုအမှတ်ရစေဖို့နဲ့ ဝေဖန်ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
6:22 AM Htet Aung Kyaw No comments
မောင်တော်စခန်း (မင်းသမီးစခန်း) တနေရာ။ (ဓါတ်ပုံ။ စာရေးသူရဲ့ Face Book မှ)
10:53 AM Htet Aung Kyaw2comments
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့။ စက်တင်ဘာ ၃၀-ရက်နေ့မှာ မျော်လင့်မထားတဲ့ ထူးခြား သတင်း ၂-ပုဒ် ကို တပြိုင်တည်း ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ပထမ-တပုဒ်ကတော့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို သူ့အစိုးရလက်ထက်မှာ ဆက်မလုပ်ဘဲ ယာယီ-ဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ကြေငြာ ချက် ပါ။ ပြည်ပအသံလွင့်ဌာနတွေရဲ့ သတင်းလွင့်ချိန်မတိုင်မီတက်လာတဲ့ အဲဒီသတင်းကို Face book, Twitter နဲ့ အင်တာနက်သတင်းဆိုက်တွေမှာဖတ်ရှုပြီး "တယ်ဟုတ်ပါလား။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရ က တကယ်ဘဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလေးစားတော့မလား" ဆိုပီး စိတ်ကူးယဉ်လို့ကောင်းတုန်း။
အဲဒီပျော်ရွင်ဘွယ် သတင်းနဲ့ ဆန့်ကျင့်ဘက်သတင်းတပုဒ် ကျနော့် Face Book ပေါ်ရောက် လာပါတယ်။ "ဒီဗွီဘီ-သတင်းဌာနအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃-သိန်းကျော် အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကြီးရှိ နေတဲ့အတွက် ဒိကိစ္စကို နော်ဝေး ရဲ ဆီတိုင်ပီး တရားရုံးကနေ စစ်ဆေးတော့မယ်" တဲ့။ ဒီကိစ္စအတွက် ပြည်တွင်း ယူဂျီ-လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူ ၃-ဦးကို စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပီး ညွန်မှုး ၂-ဦးကတော့ အုပ် ချုပ်ရေးတာဝန်ကနေ ခေတ္တနှုတ်ထွက်ထားတယ်။ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူ စပ်ဟန်ညောင်ရွေက ယာယီ ညွန်မှုးအဖြစ်တာဝန်ယူပေးထားတယ်...တဲ့။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပီလဲ။ ဒီဗွီဘီ-ထဲမှာ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပီလဲ။
တာဝန်အရပြောမယ်ဆိုရင် ဒီဗွီဘီ-အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေ လွန်ခဲ့တဲ့မေလကတည်း က ကျနော် ကို အလုပ်ကနေထုတ်ပစ်ထားပီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကိစ္စဟာ ကျနော်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်တော့။ ဒါပေမဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ။ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေက ဒီလာဒ်စားမှုအကြောင်းကို ကျနော်ဆီ တချိန်လုံးမေးလာနေ လို့ သောကြာနေ့ကနေအခုထိ အဲဒီမေးခွန်းတွေကိုဖြေနေရတာကိုက ကျနော့်အတွက် အလုပ်ကြီး တခု ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလိုတဦးချင်းကို ဖြေနေတာနဲ့စာရင် စာနဲ့ပေနဲ့ရေးပီး သိသလောက်တင်ပေးလိုက်ရင် ပိုကောင်းမလားလို့စဉ်းစားမိရင်းနဲ့ ဒီဆောင်းပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုပါတော့။
"လူတွေဟာ ဆင်းရဲမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ပေမဲ့ ချမ်းသာမှုဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြဘူး" ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အစက ကျနော်သိပ်နားမလည်ခဲ့။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဒီစကားလုံးရဲ့ အဓိပယ်ကို ဒီဗွီဘီ-က လက်တွေ့ ပြလိုက်ပါပီ။ အခုဖြစ်သွားတဲ့ မဟာလာဒ်စားမှုကြီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ဒီဗွီဘီ-စတင် ထူထောင်ကာစ ၁၉၉၂-တုန်းကဆိုရင် ဘယ်လိုမှပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အဲဒီကာလက စား စရာလာဒ်နဲနဲလေးမှမရှိသေးတဲ့အပြင် ထမင်းတောင်နပ်မှန်အောင် စားနိုင်ဖို့မလွယ်ခဲ့တဲ့ အခြေနေက နေ ဒီဗွီဘီ-ဆိုတဲ့မီဒီယာတခုဖြစ်လာအောင် စတင်ကြိုးစားလာခဲ့ကြလို့ပါ။
11:06 AM Htet Aung Kyaw No comments
လစ်ဗျားသူပုန်နဲ့ မြန်မာသူပုန်တွေ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုကွာနေသလဲ-
လစ်ဗျားနိုင်ငံရဲ့မြိုတော် ထရီပိုလီ ဆီ သူပုန်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်လာတာ။ ဒေသခံတွေက ကြိုဆို အောင်ပွဲခံနေတာကို ပြည်တွင်း-ပြည်ပရှိ မြန်မာအတော်များများ တီဗွီ-ကနေ ကြည့်ဖြစ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၂၃-နှစ်ကြာ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းပါဝင်နေပီး အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် ပြည်ပကိုရောက်နေသူတွေ။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဆီရောက်နေသူတွေဆိုရင် တီဗွီ-ကိုအသေ ချာကြည့်ပီး Face book, Twitter တွေကနေ သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေ။ မျော်လင့်ချက်တွေကို ချက် ချင်းတင်နေတာကိုသတိထားမိပါတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေထဲမှာ ကျနော်လဲ တဦးအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကို ပထမ-ဆုံးဝန်ခံလိုပါတယ်။
အာရပ်လှိုင်းစီးသူများနဲ့ အာရပ်လှိုင်းကို ဘေးကနေ ရပ်ကြည့်နေသူများ
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ လူထုံအုံ့ကြွမှုတွေဖြစ်ပီး တူနီးရှားကနေ အီဂျစ်အထိ အာနာရှင်တွေပြို ကျ။ ဘာရိန်း။ လစ်ဗျား။ ဂျော်ဒန်ကနေ ဆီးရီးယားအထိ အာဏာရှင်တပိုင်း သမ္မတတွေ။ ဘုရင်တွေ ရာထူးကနေ ထွက်ရတော့မလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ၂၀၁၁-နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ စတင်လာခဲ့တဲ့ ဒီလူထုအုံကြွမှုကို အာရပ်လှိုင်းလို့ မြန်မာစာနယ်ဇင်းသမားတချို့ကခေါ်ဝေါ်ကြပီး မြန်မာနိုင်ငံဆီကိုလဲ ဒီလှိုင်း ကရက်ရိုက် နိုင်တယ်လို့ သူတို့ကဆိုပါတယ်။ အာရပ်စတိုင် လူထုံအုံကြွမှုတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်လာစေဖို့ တိုက် တွန်းနှိုးဆော်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေ။ နှိုးဆော်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ကြီး ဒီလှုပ်ရှုားမှုကို အာရပ်လှိုင်း လှုပ် ရှားမှု။ ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေကို အာရပ်လှိုင်းစီးသူများ စသဖြင့် အမည်ပေးမှုတွေဟာလဲ အွန်လိုင်း ကွန်မြူနတီမှာအတော်လူသိများခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေနေမှာ လူထုဆန္ဒနဲ့ နိုင်ငံတကာရေစီးကြောင်းကို အာခံပီး ထွက်လာသူတဦးက တော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှုးကြီး ကဒါဖီ -ဘဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ပြည်သူကို သူပြန်သတ်နေတဲ့ ကဒါဖီ-ကို ဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုတာနဲ့ပါတ်သက်ပီး ကုလသမဂ-လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးပီးတဲ့နောက် ဒီသတ်ဖြတ်မှုတွေကိုဝင်ရောက်တားဆီးဖို့ အနောက် အုပ်စုကအဆိုပြုပီး ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့က မကန်ကွက်ဘဲ ကြားနေလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကျ တဲ့နေ့ကစပီး ကဒါဖီရဲ့ တပ်တွေကို နေတိုး-စစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့က ဗုံးကျဲ တိုက်ခိုက်တော့တာပါဘဲ့။
ကုလသမဂ-နဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့စည်းတွေက ဒီလိုပါလာပီဆိုတော့ အခြေနေဟာ ချက်ချင်း ပြောင်းလဲသွားပီး ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့စီးပွါးရေးမြိုတော် ဘန်ဂါဇီ-ဟာ ချက်ချင်းဆိုသလို အတိုက်ခံအင်အား စုတွေရဲ့မြိုတော်ဖြစ်လာပီး မြိုတွင်းရှိ ကဒါဖီသစ္စာခံတပ်တွေကိုမောင်းထုတ်ပါတော့တယ်။ နေတိုးလေ ယဉ်တွေက ကဒါဖီရဲ့ တစ်ကားတွေကို ဗုံးကျဲ။ လစ်ဗျားသူပုန်တွေက မြေပြင်ကို တလက်မချင်းသိမ်း ပိုက်။ ဒီလိုနဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီနှောင်းပိုင်းကစပီး ချီတက်လာလိုက်တာ အခု သြဂုတ်လ ၂၂-ရက်နေ့မှာတော့ သူပုန်တွေ မြိုတော် ထရီပိုလီ အထိရောက်လာပီး အခုလိုအောင်ပွဲခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။
6:08 AM Htet Aung Kyaw 1 comment
၈၈၈၈-အရေးတော်ပုံနှစ်ပါတ်လည်နှင့် တကျော့ပြန် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး။
2:07 PM Htet Aung Kyaw No comments
ရှေ့တပါတ်ဆိုရင် (၀၈၀၈၁၁) ၈-လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး ၂၃-နှစ် ပြည့်ပါတော့မယ်။ အဲဒီ အရေးတော်ပုံအတွင်းပါဝင်ခဲ့သူတွေ အခုဘယ်ရောက်နေလဲ။ ဘာတွေဆက်လုပ်နေသလဲ။ အဲဒီ
ကာလကစတင်ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲ အခု ၂၃-နှစ်ကြာပီးတဲ့အခါမှာ ဘယ်လောက် အထိခရီးရောက်နေပီလဲ။ နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ထပ်ကြာဦးမလဲ။ ဒါဟာ နှစ်ပါတ်လည်နေ့
ရောက်တိုင်း လူအတော် များများက မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ မေးခွန်းထုတ်သူဦးရေဖက်မှာပိုများ-များလာနေပီး ကိုယ်တိုင်
အဖြေရှာသူဦးရေဖက်မှာ ပိုနည်း-နည်းလာနေတာကို ကျနော်သတိထားမိပါတယ်။
ဘယ်လိုဘဲ့ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေအနေနဲ့ မေးဖို့တာဝန်ရှိသလို။ ဖြေဖို့လဲ
တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ၈-လေးလုံး
အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေထဲက ကိုမင်းကိုနိုင်အပါဝင် ၈၈-မျိုးဆက်ကျောင်းသား
တွေဟာ အခုချိန်ထိ အကျဉ်းထောင်တွေအတွင်း ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဖမ်းမခံရဘဲကျန်နေ သူတွေကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့ လက်တွဲပီး
ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ တချို့ကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပီး လွတ်တော် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း
သစ်နဲ့ စခန်းသွားဖို့ပြင်နေပါတယ်။ တချီု့ကတော့ Low profile နဲ့နေပီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွါးရေး
လုပ်သူလုပ်။ NGO တွေမှာလုပ်သူလုပ်။ ရွာပြန်ပီးခြံစိုက်သူစိုက်နဲ့ ရတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပီး နိုင်ငံရေးအခွင့်အလမ်းသစ်တခုပေါ်လာမဲ့ အချိန်ကို စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ ဒါက
(ကျောင်းသားတပ်မတော်နဲ့ ဗိုလ်မှုးနှုတ်ခမ်းမွေးရဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ)
ကျနော်အဓိကတင်ပြလိုတာကတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့။ ပါဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့
နယ်စပ်နဲ့ ပြည်ပအခြေနေပါ။ ၈-လေးလုံးအရေးတော်ပုံအပီး စက်တင်ဘာ ၁၈-မှာ
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပီးတဲ့ နောက် နယ်စပ်ဒေသဆီထွက်လာခဲ့တဲ့ ထောင်-သောင်း
ချီရှိတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေအခု ဘယ် ရောက်ကုန်ပီလဲ။ ဘာတွေဆက်လုပ်နေကြသလဲ
ဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ နယ်စပ်ရောက်ကျောင်းသား တွေ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ABSDF ခေါ်
ကျာင်းသားတပ်မတော်ဟာ အခုချိန်ထိ နယ်စပ်တကျောမှာ လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့
သူတို့ရဲ့အင်အား ၇၅-ရာခိုင်နှုံး ကျော်ကျော်က တတိယ-နိုင်ငံတွေ ဆီ ရောက်ကုန်ကြပါပီ။
အဲဒီလူတွေဟာ နေစဉ် စားဝတ်နေရေးကိစ္စ တွေနဲ့ လုံးပန်းနေရတဲ့အတွက် တောထဲက သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ပီးသိပ်မကူနိုင်တဲ့အပြင် သူတို့ရောက် နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာလဲ လက်တွေ့
ကျတဲ့နိုင်ငံရေး သိပ်မလုပ်နိုင်တော့။ ဒီလိုနေ့မျီုးမှာ နှစ်ပါတ်လည် အ ခန်းနားလုပ်။ နိုင်ငံရေး
ကြေငြာချက်တွေထုတ်။ နယ်စပ်ကရဲဘော်တွေအတွက် အလှူငွေစုပို့ ရုံထက် ပိုပီး နေပြည်တော်က
အရပ်ဝတ်-စစ်အစိုးရကို လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားအောင် သိပ်လုပ်နိုင်ဘွယ် မမြင်။
ဒါက နှစ်စဉ်မြင် နေကြအခြေနေပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ အခြေနေက အယင်နှစ်တွေထက် နဲနဲပိုပီးထူးခြားမှုရှိနေတယ်လို့ ကျနော်
ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ပီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာ ၇-ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ အငြင်းပွါး
ဘွယ်ရွေး ကောက်ပွဲနေ့စကစပီး လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေ နယ်စပ်နဲ့ မြိုပြဒေသတချီု့မှာ ပြန်
လည်ဖြစ်ပွါးနေပါ တယ်။ ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၃-နှစ် ကျနော်တို့ တောစခိုစဉ်ကနဲ့ပြန်တူလာတဲ့ တခုတည်းသောအခြေ နေဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ဆိုက်မှုအဖြစ်ကတော့ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲအလွန်
ခေါတ်ကစပီး အရှေ့အလယ် ပိုင်း နဲ့ အာရပ်ကမ္ဘာ မှာ လူထုအုံကြွမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွါးနေပီး
လစ်ဗျားနိုင်ငံမှာဆိုရင် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့အချက်ဖြစ်
အခုသတင်းပါတ် ဇွန်လ ၂၃-ရက်နေ့ဟာ နော်ဝေးနိုင်ငံအတွက်
နေ့တာ အရှည်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပီး တခြား ဥရောပနဲ့ မြောက်အမေရိကားတိုက်
တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဇွန်လ ၂၁-ကနေ ၂၄-အထိ နေ့တာအရှည်ဆုံးနေ့
Midsummer-အခန်းနားတွေကို သူနိုင်ငံဒေသအလိုက် ကျင်းပကြမယ်လို့
ဒါကြောင့် ၂၀၀၉-ဇွန်လ ၂၂-၂၃-၂၄-မှာရိုက်ထားတဲ့ နေမ၀င်ည ရုပ်သံ-မှတ်တန်းနဲ့
ခရီးသွားဆောင်းပါးကို ဒီသတင်းပါတ်အတွက် ထပ်မံ တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။